दाह्री ग्याङका युवाले किन भेटे प्रधानमन्त्रीलाई ? – रुपान्तर
मुख्य पृष्ठसमाचारदाह्री ग्याङका युवाले किन भेटे प्रधानमन्त्रीलाई ?
दाह्री ग्याङका युवाले किन भेटे प्रधानमन्त्रीलाई ?
सामाजिक सञ्जालमा देखिन दाह्री ग्याङका युवाहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन्।
बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवासा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र युवाहरूबीच भेट भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा तस्बिर राख्दै दाह्री ग्याङसँगको भेटबारे जानकारी दिएका छन्। उनले लेखेका छन्- राष्ट्रका लागि युवा-दाह्री ग्याङसँगको भेट।
दाह्री ग्याङका युवाले प्रधानमन्त्रीलाई किन भेटे त? उक्त भेटमा सहभागी भएका युवा लेनिन बिष्टले राष्ट्रका लागि युवा भन्ने अभियानमा रहेका युवाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको बताए।